အရင်လုပ်ဖူးတဲ့ ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ပြန်ရအောင် ကြိုးစားနိုင်မယ့် အချက် (၄) ချက် - For her Myanmar
အရင်လုပ်ဖူးတဲ့ ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ပြန်ရအောင် ကြိုးစားနိုင်မယ့် အချက် (၄) ချက်
အလုပ်ဟောင်းကို သံယောဇဉ် မကုန်သေးသူများအတွက်
အလုပ်ဟောင်းဆိုတာ အချစ်ဟောင်းနဲ့ အတူတူပါပဲ။ အရင်းနှီးဆုံး သူစိမ်းတွေပဲ ဆိုသလို ကိုယ့်ဘဝထဲက ချန်လှပ်လို့မရတဲ့ စာမျက်နှာတွေပေါ့။ အချစ်ဟောင်း နဲ့ သံယောဇဉ်မပြတ်တဲ့အခါ ပြန်ဆက်ချင်သလိုပဲ အလုပ်ဟောင်းကို သံယောဇဉ်မကုန်တဲ့အခါ ပြန်သွားချင်ကြသူတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုသွားတဲ့အခါ ပြန်သွားဖို့ ဖြစ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ ပြောပါရစေ။ ဒီအခါ အလုပ်ဟောင်းကိုပြန်ရဖို့အတွက် ဘာတွေလုပ်သင့်လဲဆိုတာတွေ သိထားဖို့ လိုလာပါတော့တယ်… ဘာတွေလိုလဲဆိုတော့…
၁။ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ရဲ့လား?
အလုပ်ထွက်စာ တင်ထားတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်က အလုပ်ကို ထွက်တော့မှာပဲ ဆိုပြီး ပြီးပြီးရောလုပ်ခဲ့တာမျိုး၊ အထက်အရာရှိနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို မလေးမစား ဆက်ဆံခဲ့တာမျိုး၊ အလုပ်သစ်ရပြီးတဲ့နောက် သူတို့ကို အဖက်မလုပ်တော့တာမျိုးဆိုရင်တော့ အလုပ်ဟောင်းကို ပြန်သွားခွင့်ရာခိုင်နှုန်းသိပ်ကိုနည်းသွားပါပြီ။
ဒီတော့ ကိုယ်ဟာ အလုပ်ဟောင်းမှာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ ထွက်ခွာခဲ့ဖို့ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီ အလုပ်ဟောင်းကို ပြန်မသွားဖြစ်ဘူးဆိုရင်တောင် ကိုယ်ဟာ အလုပ်ကို မလေးစားသူအဖြစ် နာမည်တွင်သွားပြီး အလုပ်အသစ်မှာတောင် အဆင်ပြေဖို့ မလွယ်တော့ပါဘူး။
Related Article >>> အင်တာဗျူးဖြေတိုင်း အများတကာထက် သာလွန်ထင်ရှားနေဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်လဲ?
၂။ ဆက်ဆံရေး မပြတ်ပါစေနဲ့။
အလုပ်ဟောင်းက အရာရှိတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါက ဒီခေတ်မှာ သိပ်လွယ်တဲ့ ကိစ္စပါ။ အလုပ်ဟောင်းက လူတွေနဲ့ Facebook ပေါ်မှာ သူငယ်ချင်းအဖြစ်ရှိနေသလို မကြာမကြာ Messenger ကနေ၊ စကားပြောပေးတာ၊ ကွန်မန့်တွေ အပြန်အလှန်ပေးတာမျိုး လုပ်ပေးရင်း ခင်မင်မှု မပျက်အောင်နေလို့ရပါတယ်။ ငါက သူတို့နဲ့ပတ်သက်စရာမလိုဘူး Unfriend လိုက်မယ်လို့တော့ မလုပ်စေချင်ဘူးရယ်…
ဒီတော့ အလုပ်ပြန်ရချင်တဲ့အခါမှာ ပြန်လာဖို့ အဆင်ပြေမပြေ သူတို့ကို ဒီအတိုင်း မေးကြည့်ပြီး အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆို လျှောက်ကြည့်လို့ ရတယ်လေ။
ဘယ်သူနဲ့မဆို ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးထားရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်
၃။ ကုမ္ပဏီ နဲ့ မျက်ခြေမပြတ်ပါစေနဲ့
ကုမ္ပဏီ ရဲ့ Facebook Page တွေကို Like လုပ်ထားပါ။ ကုမ္ပဏီ ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အမြဲလေ့လာနေပါ။ ဒါတွေက အလုပ်ပြန်လိုချင်မှ ဝုန်းဆို ထလုပ်လို့ ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘက်က အမြော်အမြင်ရှိစွာ လုပ်နေခဲ့ရမှာပါ။ ကိုယ်က အလုပ်ဟောင်းကို ပြန်ခန့်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့အခါ ကိုယ်က ကုမ္ပဏီရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို သိနေတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုခန့်မယ့်သူတွေက သဘောကျမှာပါပဲ။
၄။ မေးခွန်းတွေအတွက် ပြင်ဆင်ထားပါ
သူတို့ မေးမှာ သေချာတာကတော့ ဘာကြောင့် ဒီအလုပ်က ထွက်သွားတာလဲ၊ ဘာကြောင့် ဒီမှာ ပြန်လုပ်ချင်တာလဲ ဆိုတာမျိုးပါ။ ကိုယ့်ဘက်က ရိုးသားစွာဖြေဖို့ လိုသလို အဖြေပါးနပ်ဖို့လည်း လိုပြန်ရော။ ဒါကြောင့် အမှန်တရားလည်းဖြစ်၊ သူတို့လည်း သဘောကျမယ့် အဖြေမျိုးကို ဖြေတတ်ပါစေနော်။
ဒါဆိုရင်တော့ အလုပ်ဟောင်းကို ပြန်သွားဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်တယ်ဆိုတာ သိပြီပေါ့နော်။ အပိုအကြံဉာဏ်လေးပေးရမယ်ဆိုရင် တချို့က အလုပ်အဟောင်းကို ပြန်သွားချင်ပေမဲ့ ဖြစ်ပါ့မလားဆိုပြီး စိုးရွံ့တတ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်လျှောက်ကြည့်တာက ကိုယ့်အတွက် မမှားတာမို့ လက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့နော်။
အောင်မြင်ထက်မြက်တဲ့ ယောင်းလေးတွေ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေနော်…
References : thebalancecareers, fastcompany
အလုပျဟောငျးကို သံယောဇဉျ မကုနျသေးသူမြားအတှကျ
အလုပျဟောငျးဆိုတာ အခဈြဟောငျးနဲ့ အတူတူပါပဲ။ အရငျးနှီးဆုံး သူစိမျးတှပေဲ ဆိုသလို ကိုယျ့ဘဝထဲက ခနျြလှပျလို့မရတဲ့ စာမကျြနှာတှပေေါ့။ အခဈြဟောငျး နဲ့ သံယောဇဉျမပွတျတဲ့အခါ ပွနျဆကျခငျြသလိုပဲ အလုပျဟောငျးကို သံယောဇဉျမကုနျတဲ့အခါ ပွနျသှားခငျြကွသူတှေ ရှိပါတယျ။ ဒီလိုသှားတဲ့အခါ ပွနျသှားဖို့ ဖွဈနိုငျရဲ့လားဆိုတော့ ဖွဈနိုငျပါတယျလို့ ပွောပါရစေ။ ဒီအခါ အလုပျဟောငျးကိုပွနျရဖို့အတှကျ ဘာတှလေုပျသငျ့လဲဆိုတာတှေ သိထားဖို့ လိုလာပါတော့တယျ… ဘာတှလေိုလဲဆိုတော့…
၁။ ဂုဏျသိက်ခာနဲ့ လမျးခှဲခဲ့ရဲ့လား?
အလုပျထှကျစာ တငျထားတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျက အလုပျကို ထှကျတော့မှာပဲ ဆိုပွီး ပွီးပွီးရောလုပျခဲ့တာမြိုး၊ အထကျအရာရှိနဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေို မလေးမစား ဆကျဆံခဲ့တာမြိုး၊ အလုပျသဈရပွီးတဲ့နောကျ သူတို့ကို အဖကျမလုပျတော့တာမြိုးဆိုရငျတော့ အလုပျဟောငျးကို ပွနျသှားခှငျ့ရာခိုငျနှုနျးသိပျကိုနညျးသှားပါပွီ။
ဒီတော့ ကိုယျဟာ အလုပျဟောငျးမှာ ဂုဏျသိက်ခာရှိစှာ ထှကျခှာခဲ့ဖို့ သိပျအရေးကွီးပါတယျ။ ဒီ အလုပျဟောငျးကို ပွနျမသှားဖွဈဘူးဆိုရငျတောငျ ကိုယျဟာ အလုပျကို မလေးစားသူအဖွဈ နာမညျတှငျသှားပွီး အလုပျအသဈမှာတောငျ အဆငျပွဖေို့ မလှယျတော့ပါဘူး။
Related Article >>> အငျတာဗြူးဖွတေိုငျး အမြားတကာထကျ သာလှနျထငျရှားနဖေို့ ဘာတှေ လိုအပျလဲ?
၂။ ဆကျဆံရေး မပွတျပါစနေဲ့။
အလုပျဟောငျးက အရာရှိတှေ၊ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှနေဲ့ အဆကျအသှယျမပွတျဖို့ကလညျး အရေးကွီးပါတယျ။ ဒါက ဒီခတျေမှာ သိပျလှယျတဲ့ ကိစ်စပါ။ အလုပျဟောငျးက လူတှနေဲ့ Facebook ပျေါမှာ သူငယျခငျြးအဖွဈရှိနသေလို မကွာမကွာ Messenger ကနေ၊ စကားပွောပေးတာ၊ ကှနျမနျ့တှေ အပွနျအလှနျပေးတာမြိုး လုပျပေးရငျး ခငျမငျမှု မပကျြအောငျနလေို့ရပါတယျ။ ငါက သူတို့နဲ့ပတျသကျစရာမလိုဘူး Unfriend လိုကျမယျလို့တော့ မလုပျစခေငျြဘူးရယျ…
ဒီတော့ အလုပျပွနျရခငျြတဲ့အခါမှာ ပွနျလာဖို့ အဆငျပွမေပွေ သူတို့ကို ဒီအတိုငျး မေးကွညျ့ပွီး အဆငျပွနေိုငျတယျဆို လြှောကျကွညျ့လို့ ရတယျလေ။
ဘယျသူနဲ့မဆို ကောငျးမှနျတဲ့ဆကျဆံရေးထားရှိဖို့ အရေးကွီးပါတယျ
၃။ ကုမ်ပဏီ နဲ့ မကျြခွမေပွတျပါစနေဲ့
ကုမ်ပဏီ ရဲ့ Facebook Page တှကေို Like လုပျထားပါ။ ကုမ်ပဏီ ရဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှကေို အမွဲလလေ့ာနပေါ။ ဒါတှကေ အလုပျပွနျလိုခငျြမှ ဝုနျးဆို ထလုပျလို့ ရတာ မဟုတျပါဘူး။ ကိုယျ့ဘကျက အမွျောအမွငျရှိစှာ လုပျနခေဲ့ရမှာပါ။ ကိုယျက အလုပျဟောငျးကို ပွနျခနျ့ဖို့တောငျးဆိုတဲ့အခါ ကိုယျက ကုမ်ပဏီရဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှကေို သိနတေယျဆိုရငျ ကိုယျ့ကိုခနျ့မယျ့သူတှကေ သဘောကမြှာပါပဲ။
၄။ မေးခှနျးတှအေတှကျ ပွငျဆငျထားပါ
သူတို့ မေးမှာ သခြောတာကတော့ ဘာကွောငျ့ ဒီအလုပျက ထှကျသှားတာလဲ၊ ဘာကွောငျ့ ဒီမှာ ပွနျလုပျခငျြတာလဲ ဆိုတာမြိုးပါ။ ကိုယျ့ဘကျက ရိုးသားစှာဖွဖေို့ လိုသလို အဖွပေါးနပျဖို့လညျး လိုပွနျရော။ ဒါကွောငျ့ အမှနျတရားလညျးဖွဈ၊ သူတို့လညျး သဘောကမြယျ့ အဖွမြေိုးကို ဖွတေတျပါစနေျော။
ဒါဆိုရငျတော့ အလုပျဟောငျးကို ပွနျသှားဖို့ ဘာတှေ လိုအပျတယျဆိုတာ သိပွီပေါ့နျော။ အပိုအကွံဉာဏျလေးပေးရမယျဆိုရငျ တခြို့က အလုပျအဟောငျးကို ပွနျသှားခငျြပမေဲ့ ဖွဈပါ့မလားဆိုပွီး စိုးရှံ့တတျပါတယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ပွနျလြှောကျကွညျ့တာက ကိုယျ့အတှကျ မမှားတာမို့ လကျမလြှော့လိုကျပါနဲ့နျော။
အောငျမွငျထကျမွကျတဲ့ ယောငျးလေးတှေ ဖွဈနိုငျကွပါစနေျော…
Tags: Career, career girl, Hire, Resign, work
ARMYs တွေ စိတ်ပူနေရတဲ့ JungKook ရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ
Single Mom ဖြစ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား
Sugar Cane January 17, 2019